HPC199 AI Yekutengesa motaimotokari kuverenga iyo inoverenga inouya uye inobuda mota. Inogona zvakare kushandiswa kuverenga zvimwe zvinhu kana kushandiswa kune vanhu kuverenga. Vazhinji veduYekutengesa mota zviri patent zvigadzirwa. Kuti tidzivise kubiridzira, hatina kuisa zvakawandisa pawebhusaiti. Unogona kutaura nevashandi vedu vekutengesa kuti vakutumire ruzivo rwakadzama nezve yeduYekutengesa mota.
HPC199 AI Yekutengesa mota ine yakavakirwa-mukati AI yekugadzirisa chip, iyo inokwanisa kuzvimiririra kupedzisa tarisiro yekutarisa, kuverenga kuzivikanwa, uye kutonga. Inogona kushandiswa kune anti-tailing control, kuverenga kwemotokari, kuwandisa kwekudzora, manejimendi manejimendi uye zvimwe zviitiko. Iyo inogona zvakare kuve yakasanganiswa neiyo brand DVR hard disk vhidhiyo marekodhi kuti ipe yakakwira-tsananguro vhidhiyo Iyo yakawanda-chinangwa uye yakawanda-basa rekuverenga chigadzirwa ine yekutarisa basa, HPC199 AIYekutengesa mota inogona kushandiswa paInternet kana kumira-yega, uye inogona zvakare kupa yakangwara chengetedzo kudzora mhinduro dzekushambadzira kushambadzira, zvekutengesa, mapaki, mabhangi, nzira yekufambisa uye mamwe maindasitiri.
HPC199 AI Yekutengesa mota inobatanidza iyo traffic manhamba basa, iyo isingakanganisike neanoona kona.
Iyo yakanyanya nzvimbo yekutarisa inogona kuvhara kusvika pamamita makumi maviri. Iyo inogona kuteedzera makumi mashanu ekuvavarira panguva imwe chete.
Kuverenga kwemotokari kunoitwa zvinoenderana nenzvimbo yakasarudzika uye kunongedzera kwekuverenga nzira.
Imwe chete A HPC199 mota counter inogona kuona akasiyana manhamba eanouya uye ari kubuda mota.
HPC199 AI Yekutengesa motainotora IP65 isina dhizaini dhizaini, iyo inogona kuita kuverenga kwemotokari neyakaenzana kunyangwe kana ichishandiswa kunze. HPC199 AI Vehicle counter inotsigira kumisikidzwa chero pakona, uye mukana wekukanganiswa pasi pechiedza chemwenje, kuvhenekerwa kana mwenje wezuva wakanyanya kuderera. Iyo inogona otomatiki kusefa iko kukanganiswa kweyekuvavarira mimvuri. Iyo inoshandisa inonamira kwazvo inzwa yemufananidzo kunyangwe husiku ine isina kusimba ambient mwenje. Kazhinji mota kuverenga huwandu. Kana iyo HPC199 AIYekutengesa mota haigone kunyatso tsanangudza tarisiro pane yakasarudzika kona, kudzidza kwakanangwa uye kudzidziswa kunogona kushandiswa kuwedzera iyo yekuenzanisira sampuro yekuvandudza chiyero chekucherechedza.
Kuverenga mota basa reHPC199
1. Network mushandisi manejimendi, network nguva kuwiriranisa, tsigira iri kure chaiyo-nguva yekutarisa.
2. Tsigira digital 3D ruzha rutapudzo, mufananidzo wacho wakajeka uye wakatsetseka.
3. 1 RJ45 interface, 1 DC12V interface, 1 yakaoma kuonana interface, 1 RS485 interface.
4. Tsigira ONVIF protocol, yenyika yakajairwa G28181 protocol.
5. Tsigira mutakurwi kuyerera kwekuonekwa, mota kuyerera kuona, kutsigira nzvimbo kutonga, mutakurwi kuyerera uye mota kuyerera kwakasanganiswa kuona
6. Tsigira otomatiki restart basa mushure mekundikana kwesimba / kutadza kusatarisirwa.
7. Tsigira hunhu superposition, superposition chinzvimbo chinogadziriswa uye otomatiki reverse ruvara kuratidza.
8. Maindasitiri egiredhi dhizaini, yakapusa dhizaini, yakanyatso nyatso uye yakasimba kugadzikana.
9. Tsigira otomatiki switching yemafirita kuti uone masikati nehusiku kuongorora, tsigira nharembozha yekutarisa; POE magetsi (inosarudzika).
10. Kutsigira kuona kwekufamba kwescreen / kuvharirwa kwechidzitiro, nzvimbo dzekuona dze4 uye nzvimbo dzekuvhara dze4 dzinogona kuiswa.
11. Mushandisi anogona kusarudza iyo kodhi kuyerera uye kugadzirisa iyo furemu rate, resolution, uye vhidhiyo mhando.
Magetsi emagetsi mode
DC12V simba Adapter
0.1 Lux (Streetlight nharaunda husiku)
10-30 furemu / wechipiri
Rukova rukuru 3840 × 2160 Sub rukova 1280 × 720
Motokari hunhu kupatsanura
Bhazi / rori / mota / mudhudhudhu (tricycle) / bhasikoro
Webhu software manejimendi
Network chiteshi, 485 chiteshi
Tine mhando dzakawanda dze IR Yekutengesa mota, 2D, 3D, AI Yekutengesa mota, pane imwe nguva inogara ichikukodzera, ndapota taura nesu, tichakurudzira iyo yakakodzera kwazvo Yekutengesa mota zvako mukati memaawa makumi maviri nemana.
Pashure: MRB AI boka revanhu rinopikisa HPC198
Zvadaro: MRB musoro kuverenga kamera HPC010